5 yakavhurika sosi maturusi ekushandisa yako imba | Linux Vakapindwa muropa
Iine IPv6, iyo IoT kana l Indaneti yezvinhu, izvozvi zviwande uye zvakawanda zvigadzirwa zvichabatanidzwa, kubva kumotokari, zvishandiso, zvinopfeka, matoyi, dzimba, nezvimwe. Uye mutsinga mutsva uyu unofanirwa kushandiswa. Nekombiki iyi nyowani iyo ichapa akawanda akawanda anowanikwa IPs uye zvishoma nezvishoma kutsiva IPv4, imba otomatiki iri mune mhanza uye mune ino chinyorwa tichaisa zvishanu yakavhurika sosi yezvinhu zveimba yako.
Zvishandiso zvishanu izvi ivo vanokutendera iwe kuti ushandise mabasa akakomberedza imba yako kuita kuti hupenyu hwako hunyanye kugadzikana, sekufunga kunoita kumba. Remote kudzora mwenje masystem, mhepo inodziya, chengetedzo makamera, kudzikisa simba rekushandisa, kupa chengetedzo sisitimu, kana kudzora kudiridza kwebindu rako kana kuchenesa nharaunda yako kunogona kuitika nemidziyo mitsva.
Kuva open source kunyorera, iwe unenge uine chivimbo nezve zvekuita neyako imba data uye ruzivo, chimwe chinhu chinogamuchirwa nguva dzose. Mamwe mapurojekiti akavakirwa pane yakavhurwa sosi ari kutogadzirwa pachishandiswa michina yakadai seRaspberry Pi kana kushandisa chirongwa cheOpenDomo, zvichidaro kuvimbisa rusununguko, asi tinodawo kupa izvi zvekushandisa zvemumba kubva kuLxA:
Calaos: yakagadzirirwa kugadzirisa mabasa akazara epamba, neinobata interface, webhu webhu, zvekushandisa zveiOS uye Android, pamwe neLinux.
Domoticz: ndiyo automation system ine rutsigiro rwemidziyo yakasiyana senge kure kudzora, zviteshi zvemamiriro ekunze, chiutsi cheutsi, nezvimwe. Yakagadzirwa muHTML5 uye inokwanisa kuwanikwa kubva pawebhu mabhurawuza uye kunyangwe yakagadziridzwa kuve isingaremi uye kugona kumhanya kunyangwe pane masisitimu senge Rapsberry Pi.
Mushandi Wepamba: Icho chimwe chakavhurika chikuva chinogona kuitiswa pane chero ipuratifomu iyo Python 3 inogona kuiswa, hwaro hwekushanda kwayo.
OpenHAB: Ndiyo shorthand yeOpen Home Automation Bhazi, uye inozivikanwa. Iyo ine nharaunda yakakura kuseri kwayo uye inokutendera iwe kushandisa nhamba hombe yemidziyo inoenderana. Izvo zvakanyorwa muJava uye zvinokutendera iwe kunyange kugadzira yako wega mushandisi interface kune yako imba system.
OpenMotics: Imba otomatiki system ine zvese zviri zviviri Hardware uye yakavhurika software, yakagadzirirwa kupa yakakwana sisitimu yekubatanidza yechitatu-bato zvishandiso kuburikidza newiring, kurerutsa iri basa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » 5 yakavhurika sosi maturusi ekugadzirisa imba yako
Musiyano uripo pakati peGNOME, MATE uye Kubatana